7 Arrimood oo ay sameyso Gabadha sida xad dhaafka ah kuu jecel - Aayaha
7 Arrimood oo ay sameyso Gabadha sida xad dhaafka ah kuu jecel
Aayaha editorNovember 6, 2018
Sidee ninka ku ogaan karaa in haweeneyda ay jeceshahay?
Maxay tahay waxyaavaha laga eego?
Hoos ka aqriso tilmaamaha lagu garto.
Tani micnaheeda ma ahan inay dharka ugu wanaagsan kuu xirato mar walba balse waxay ku dadaaleysaa inaad u riyaaqdo.
2. Maseyrkeeda ayay kuusoo bandhigtaa
Guud ahaan haweenka waxay jecelyihiin in maseeyrkooda ay qarsadaan maxaa yeelay haddii ay soo bandhigaan waxay ka dhigantahay in bannaanka soo dhigaan dayacaadooda taasina ma sameynayaan inay dhab kuu jecelyihiin ma ahane.
Taasina waad istaahishaa.
3. Sheegid sirteeda ugu fog
Gabdhaha waxay sirtooda ugu xun ugguna qariska badan oo aysan marnaba bannaanka soo dhigin waxay u sheegaan qof ay si dhab ah jecelyihiin, marka lagma yaabo inay kuu sheegaan haddii aysan dhab kuu jecleyn.
4. Sheegid dareenkeeda
Haweenka way necebyihiin inay dareenkooda bannaanka soo dhiggaan marka haddii ay bannaanka kuusoo dhigto dareenkeeda, aamin, inay dhab ka tahay.
5. Farxad xad dhaaf ah
Hadey kujeceshay kaama diidi doonto waxba xate hadey yihijn wax aadan xaq ulaheyn waana wax xate eysan ka ogolaan doonin raga kale ama asxaabteeda ugu dhow. Hadaba taasi maahan mid ad marmarsiyo uga dhigato inad si an habooneyn ula dhaqanto haweenka…. laakiin hadii aadan wali qalbigeeda dhex qaadin isku day inad kasbato iyada adiga oo aaminsan iney kujeceshahay taasi oo keeni doonta inad kahesho waxaad doonto, marwalibana waxaa wanaagsan inad aaminto iney kujeceshahay.
Mar kasta waxay kugu soo dhoweyneysaa cunto hagaagsan, marka ogoow waxaa kujira dareen gaar ah.
7. Waxay kugu jeceshahay caadooyinka ay dadka kale kugu necebyihiin
Waxa ay saaxiibadaa kugula qoslaan waxaa dhab ah inay ka hesho, waxaana ogahay qof og karti la’aanta saaxiibkeed inay iyada la tahay wax wanaagsan dhinaca maada.
Afar Waxyaabood Oo Muhiim Ay Tahay In Guurka Kahor aad Kala Hadasho Lamaanahaaga